Baro Barashada Mashiinka. Kheyraadka, tusaalooyinka iyo casharrada - Ikkaro
Cilmiga macmalka ah, barashada mashiinka, barashada qoto dheer. dhammaantood waa fikrado caan ah oo sii kordhaya. Waxay umuuqataa wax mustaqbalka soosocda, laakiin waxaa aad iyo aad looga adeegsanayaa dhamaan qaybaha nolosha. Kaliya maaha internetka, maahan oo keliya aragtida kombiyuutarka. Waxay baarayaan cudurada, waxay saxayaan dhibaatooyinka, wadida gawaarida iyo waxyaabo kale oo fara badan
Maxaan ka wada hadlaynaa
Warar ma daabici doonno. Waxaan isku dayi doonaa inaan ka helno macluumaad faa'iido leh sida caadiga ah Ikkaro. Aruurinta aaladaha, isku dayga inaad sharaxdo fikradaha, sameynta tusaalooyinka Barashada Mashiinka. Codsiyada dhinacyada kala duwan, sida IoT, iyo xog kastoo xiisa leh oo aad hesho.
Khabiir ma ihi. Waxaan ku guda jiraa waxbarashadii laakiin waxaan aaminsanahay inaan ku biirin karo aqoonta aan barto kuna horumariyo.
Koorsooyin lagu baranayo Mashiinka Barashada, Barashada Qoto dheer iyo caqliga macmalka ah
Kuwani waa ilaha ugufiican ee aan ku helayo inaan ka barto Mashiinka Barashada, Barashada Qoto dheer iyo mowduucyada kale ee Cilmiga Sirdoonka.
Waxaa jira koorsooyin bilaash ah oo lacag la bixiyo iyo heerar kala duwan. Dabcan, in kastoo ay jiraan qaar Isbaanish ah, badankood waxay ku qoran yihiin Ingiriis.
Waxaan u kala qaadaa koorsooyin gaagaaban (1 ilaa 20 saacadood) Kuwaani waa xiriirkii ugu horreeyay ee maadada laga sameeyo.
Horudhaca Barashada Mashiinka by Kaggle Gaaban, kaliya 3 saacadood
Koorsada Shilka ee Barashada Mashiinka waxaa leh Google oo wata TensorFlow APIs (15 saacadood)
Horudhaca Barashada Qoto dheer ee Kaggle 4 saacadood si loo barto DL iyo TensorFlow. Baro fikradaha ugu waaweyn ee Barashada Mashiinka oo dhis moodooyinkaaga ugu horreeya.
Aragtida Stanford Classes IA liistada YouTube ee fasalada Stanford si loo barto aragtida kombiyuutarka iyo AI (saacadaha 20)
Hordhaca Barashada Qoto dheer by MIT Kaliya waxaa loogu talagalay ardayda ama ardaydii hore laakiin waxaan arki karnaa fiidiyowyada fasallada.
Qaybaha AI. Hordhac bilaash ah oo loogu talagalay Sirdoonka Artificial ee khubarada NON ee Jaamacadda Helsinki.
Markaan fiirinayo xogta taariikhiga ah ee ay bixiso goob ilaaliyaasha saadaasha hawada ee magaaladeyda, waan arkaa taas waxay ku bixiyaan oo keliya iyaga garaaf ahaan iyo u soo dejisan sida PDF. Ma fahmin sababta aysan kuugu ogolaaneynin inaad kala soo baxdo csv, taasoo waxtar badan u yeelan laheyd qof walba.
Marka waxaan raadinayay mid xalka in miisaskan laga gudbiyo pdf ilaa csv ama hadii qof doonayo inuu qaabeeyo Excel ama Xafiiska Libre. Waan jeclahay csv maxaa yeelay csv waxaad ku samaysaa waxkasta oo aad kula qabsan karto Python-ka iyo maktabadaha ama waxaad si fudud ugu soo dhoofsan kartaa waraaqo kasta.
Maaddaama fikraddu tahay in la helo nidaam otomaatig ah, waxa aan doonayo waa qoraal la shaqeeya Python waana halka ay Tabula ka soo gasho.
Qodobkaan waxaan uga tagayaa a Hagaha rakibaadda Anaconda iyo sida loo isticmaalo maamuleha xirmada Conda. Tan waxaan ku abuuri karnaa jawi horumarineed Python iyo R maktabadaha aan rabno. Aad u xiiso badan in lagu bilaabo jahwareerka Mashiinka Barashada, falanqaynta xogta iyo barnaamijka Python.
Anaconda waa qeybinta bilaashka ah ee Furan Ilaha barnaamijyada Python iyo R barnaamijyada sida ballaaran loogu adeegsado xisaabinta sayniska (Sayniska Xogta Sayniska Xogta, Mashiinka Barashada, Sayniska, Injineerinka, falanqaynta saadaalinta, Xogta Weyn, iwm).
Waxay rakibaysaa tiro badan oo codsiyo ah oo si ballaaran loogu adeegsado maadooyinkan hal mar, halkii looga baahnaa inay mid mid u rakibto. . In kabadan 1400 waana taas kuwa ugu badan ee loo adeegsado edbintaan. Tusaalooyinka qaarkood
Ka dib markii ay dhameysteen ah Koorsada Barashada Mashiinka, Waxaan eegay halka aan ka sii wado. Deegaanada horumarineed ee loo adeegsaday koorsada nooca Octave / Matlab maahan waxa dadku isticmaalaan, marka waa inaad ku boodaan wax tayo sare leh. Musharaxiinta sida aadka ah la ila taliyay waxaa ka mid ah Keras, adoo adeegsanaya backend TensorFlow. Uma socon doono in Keras uu ka fiican yahay qalabka kale ama qaabab kale ama in la doorto TensorFlow ama Theano. Kaliya waxaan sharaxayaa sida loogu rakibi karo Ubuntu.
Marka hore, waxaan isku dayay inaan ka soo rakibo dukumiintiyada bogagga rasmiga ah, waana suurtagal, marwalba waxaan lahaa qalad, su'aal aan la xallin. Dhamaadka waxaan u aaday inaan helo casharro gaar ah oo ku saabsan sida loo rakibo kerasyada Ubuntu Haddana waxaan qaatay laba maalmood oo aan waqti badan ku qaatay habeenkii. Ugu dambeyn waan ku guuleystey waana kaaga tegayaa sidaan ku sameeyey haddii ay dhacdo inay wadada kuu xaari karto.
Maaddaama aan raacayno tillaabooyinka ay soo jeediyeen websaydhyada ee aan kaaga tegayo ilaha dhammaadka casharradan, waxaan rakibeynaa PIP aanan lahayn, si aan u maareeyo xirmooyinka. howlfiican on Linux waa uun taas, nidaam maarayn xirmo oo ku qoran Python.
sudo apt-get rakibi python3-pip sudo apt rakibi python-pip
Waxaan dhameeyay koorsada Barashada Mashiinka Coursera
Waan dhammeeyay Koorsada Barashada Mashiinka ee ay bixiso Jaamacadda Stanford ee Coursera, oo maadaama ay horeba u jireen dhowr qof oo si furan iyo si gaar ahba ii weydiiyay arrintaan, waxaan doonayay inaan wax yar ka sii faahfaahiyo wixii aniga ila muuqday iyo in qofkii go'aansada inuu sameeyo uu garanayo waxa ay heli doonaan
Waa a koorso bilaash ah oo ku saabsan Barashada Mashiinka, waxaa baray Andrew Ng. marka aad dhameyso haddii aad rabto waxaad heli kartaa shahaado taageereysa xirfadaha lagu gaarey € 68. Waxaa loo qaybiyaa 3 tiir, fiidiyowyo, Imtixaano ama Quizz iyo layliyo barnaamij. Waxay ku qoran tahay Ingiriis. Waxaad ku haysataa cinwaanno hoosaadyo ah luqado kala duwan, laakiin Isbaanishku ma fiicna mararka qaarkoodna waa ay dhacayaan, aad ayey ugafiican yihiin haddii aad ku qorto Ingiriis
Waa aragti ahaan. Laakiin waxaa laga yaabaa inay taasi tahay sababta ay ugu muuqato inay tahay hab wanaagsan oo lagu bilaabi karo maxaa yeelay ma baran doontid oo keliya waxa la sameeyo laakiin maxaad u qabataa.